4ta tallaabo ee lama huraanka ah marka la korsanayo eyga | Eeyaha Adduunka
Maamulka Eeyaha Dunida | 29/09/2021 13:24 | Korsashada eyga
Goorma waxaan korsano eyHaddii uu yahay qof weyn ama weli ah ilmo yar, waxaan qabnaa shaki badan oo ku saabsan waxa ay tahay inaan sameyno si uu u helo nolol wanaagsan oo aan ku deganaan karno ku raaxeysiga wehelkiisa. Welwelkani waa caadi, waxay ka dhigan tahay in eygaagu uu ku jiri doono gacmaha qof bixin doona dareenka lagama maarmaanka ah. Halkan waxaa ah 4 talooyin oo wax walba fududeyn doona bilaaw soo biirintaada si wada jir ah.
1 Shaqada warqaddu
2 Diyaarso wax walba
3 U kaxee si uu ula kulmo dhakhtarkiisa
4 Jadwalka adag
Waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay inaad wax walba u habaysid arrintan. Waa tallaabo ay tahay inaan si sax ah u sameyno. Qof walba wuu ogyahay in saaxiibadeenna eyga waa inuu lahaadaa jajab oo si habboon loo aqoonsado xogteenna si aan si dhakhso leh ugu helno haddii uu lumo.
Si kastaba ha ahaatee, waxa aan qof walba ku xisaabtamin, oo waliba aad muhiim u ah, ayaa ah arrinta ammaan u ah eeyaha. Waxaa si buuxda loogu talinayaa laba sababood. Midda hore waa mas'uuliyad madani ah. Gaar ahaan haddii eygeenu waa mid aan nidaamsanayn ama xitaa xoogaa rabshad ah, sharciga hortiisa waxaan noqon doonnaa kuwa ka jawaaba wixii waxyeelo ah oo ay keeni karto. Sababta labaad waa booqashada dhakhtarka xoolaha. Nasiib darro waxaa jira eeyo yaryar oo ay tahay inay aad u tagaan dhakhtarka xoolaha. Sidaan ognahay, booqashooyinkani waxay noqon karaan kharash aad u adag oo aan qaadan karno marka aanan si fiican u qorsheyn.
Sababahaas iyo kuwa kaleba aad bay muhiim u tahay inaan dhabarkayaga si fiican u daboolno xaalad kasta, iyada oo loo eegayo xayawaankayaga iyo kuwayaga.
Diyaarso wax walba
Kahor intaanu lammaanaha cusubi guriga iman, waa inaan dhawr qorshe u qorshaysannaa si uu u fiicnaado laga bilaabo daqiiqadda ugu horraysa oo habka la qabsiga uu u noqdo mid degdeg ah.
Waa caadi inaad marka hore dareento dareen -celin, markaa aad ayaa loogu taliyay in aan diyaarino meel xaddidan kuwaas oo ay ku jiraan waxyaalo aad faraha ku hayso oo aadan burburin karin. Waxay kaloo u baahan doontaa meel jilicsan oo lagu nasto, marka loo eego baaxadeeda. Dabcan, waa inaad haysataa ilaha cabbitaanka oo had iyo jeer haysta biyo nadiif ah iyo weel cunto. Si fiican u ogow nooca cuntada uu u baahan yahay, haddii ay ka timaaddo meel hoy ah oo ay suurtogal tahay, sii cunno la mid ah bilowga. Sidoo kale u diyaari alaabta uu ku ciyaaro si uu isagu u maaweeliyo. Ugu dambayn, haddii aad weli tahay eey oo aadan dibadda aadi karin, xusuusnow inaad soo iibsato nigis -hoosta.
U kaxee si uu ula kulmo dhakhtarkiisa
Meel kasta oo ay ka timaaddo iyo da 'kasta oo ay tahay, waa inaadan joojin inaad xayawaankaaga u kaxaysato dhakhtarka xoolaha. Sida iska cad waa lama huraan haddii aadan weli tallaalin oo aadan weli bixi karin. Laakiin sidoo kale waa inaad samaysaa haddii uu qaangaar yahay, xitaa haddii muuqaalkiisu caafimaad qabo oo uu kaaga yimaado meel aad si buuxda ugu kalsoon tahay.
La booqo dhakhtarka xoolaha Waxay kuu oggolaan doontaa inaad furto feyl iyo xiriirka ugu horreeya ee aad la yeelato xirfadlaha daryeela caafimaadkaaga. Rugta caafimaadka, wuxuu weydiistaa baaritaan hore si loo hubiyo in wax walba ay hagaagsan yihiin iyo in aad leedahay nabad buuxda oo maan ah. Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la dilo ama dhakhtarku wuxuu ogaan karaa dhibaatooyin ay tahay in la fiiriyo si aysan u noqon kuwo murugsan.
Waxaas oo dhami waxay noqon doonaan qodobbo aad u fudud in la fuliyo haddii aad raacdo talooyinkayaga ku saabsan kiraynta caymiska xoolaha eeygaaga.
Inkastoo mararka qaarkood ay u ekaan karto mid adag oo aan ku adkeyneyno xayawaankeena, haddana aad bay muhiim u tahay tan iyo bilowgii aan u dejinno waqtiyo adag cuntada iyo saacadaha socodka si ay naftooda u nafisaan. Saaxiibkayaga cusub si dhakhso ah ayuu ula qabsan doonaa wax walbana annaga iyo isagaba way u fududaan doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Korsashada eyga » 4ta tallaabo ee lama huraanka ah marka la korsanayo eyga